I-50 yeeNwele eziPhambili kunye neenwele zeNwele zabafazi ngo-2021 - Ubuhle
Imisebenzi Kunye Nemali Kufuneka Ubone Itekhnoloji Ukulungiswa Kwangoko Uhlobo Lweceleb Impilo Uphononongo Lweemovie Ukuhombisa Iimveliso Abahlobo Nosapho
Iinwele ezingama-50 eziGqwesileyo zabafazi ngo-2021
Sivame ukufumana iinwele ngamaxesha abalulekileyo ebomini: Emva kokuqhekeka, ngaphambi kwemisebenzi emitsha, emva kokuba sichithe iinyanga ezili-12 zikhuselekile ekhaya. Emva konyaka onje nge-2020, asonwabanga ukuba singenise utshintsho kuzo zonke iinkalo, ukuqala nge-chop entsha.
Ukungabikho kweekhaphethi ezibomvu kunye neendlela eziqhelekileyo esijonge kuzo ukukhuthazwa kweenwele, sibona ukubuyela kwiinwele ze-retro ezinje nge-shags, amalengalenga Kwaye kunye nee-mullets (njengoko kubonwe kuMiley Cyrus naseZendaya). Kodwa ukuba lutshintsho oluncinci kakhulu kuwe, kuhlala kukho ukhetho lokufumana ukusika ubude obude okanye ubude, ii-bangs ezixutyiweyo (okt, izitayile ezifuna ulondolozo oluncinci kwaye ziya kukhula kakuhle).
Nokuba uthini na uhlobo lweenwele zakho okanye isimbo osithandayo, nazi iinwele ezingama-50 zokucheba ezinokuthi ziqwalaselwe ngo-2021.
Ezinxulumene: Sibuza uStylist: Yintoni eyenza ukuba uQeqesho lweNwele yakho lutshintshe?
Iifoto zeKarwai Tang / i-Getty Izithombe
1. Ubuthuntu uBob
Buza umgcini weenwele zakho ukuba asule-asike izitshixo zakho ngenxa yokusikwa okungaphezulu okubukhali.
UJon Kopaloff / Getty Izithombe
2. Mfutshane ngee-Bangs ezide
Yiya mfutshane emacaleni kwaye ushiye ubude ngaphezulu. Emva koko sebenza ipomade ngokujonga ukubuyela umva.
UDave Benett / Getty Izithombe
3. Mullet yanamhlanje
I-mullet yanamhlanje i-la Miley ineempawu zobume bokumila ngaphambili nangobude obucothayo ngasemva. Ingcebiso: Ishampu eyomileyo Ngaba i-BFF yakho yolu ruffled, usuku-mbini ubume.
UTim P. Whitby / imifanekiso kaFetty
4. IPixie ende
Phakathi kobob kunye nepixie, le ndlela ibhetyebhetye ngakumbi kunokuba ucinga. Icandelo-ecaleni layo kwaye utshayele iziphelo kwelinye icala ujonge ukubukeka.
5. Uluhlu lweeTapile
Yongeza ubomi kubunwele obuqhwalelayo ngokusika umaleko ngokuthe ngcembe owenza intshukumo kunye nomzimba (nokuba awunakubamba curl).
6. I-Smooth Lob
Indawo esecaleni enzulu kunye nemitya ethe tyaba ithatha ilob ukusuka kwesiqhelo ukuya ngqo ngqo.
Ukuba uyayithanda imitshi yakho emide kodwa ubuthiyile ubunzima, cela iinwele zakho ukuba zibunjwe ngophungu.
UAngela Weiss / imifanekiso kaFetty
8. Sleek kwaye Tye
Izinwele ezomileyo ezomileyo ngokuthe ngqo, emva koko uye ngaphaya kwayo ngensimbi ethe tyaba. Ukugqiba nge-serum egudileyo ye-ultra-silky frizz-free strands.
UMichael Tran / Getty Izithombe
9. I-Afro evulekileyo ye-Curly Afro
Wena unako yenza i-afro nokuba awunazo iinwele ezi-coily. Yikhethe kwaye usebenzise ijeli encinci ukuze ibambe ubume bayo.
Imantra yemihla ngemihla: Vuka, ipomade kwaye nihambe. Kubaluleke ngokulula oko.
UMichael Kovac / imifanekiso kaFetty kaMoet kunye neChandon
11. I-Choppy Lob
Imigangatho embalwa kuko konke okufunekayo. Yenza isitayile sakho sisebenzise ishedyuli yayo ethandekayo yokucheba elona gradient yendalo.
12. Amakhethini eBangs
Ukukhulisa i-fringe yakho ethe tye okanye ufuna ukuyinyenyela kuyo yonke loo nto? Olu hlobo lukhulu kubo bobabini. Iziko-hlula iinwele zakho kwaye ubuze ixesha elide, lokutshayela amakhethini.
Ifoto nguDan MacMedan / Getty Izithombe
Edgy xa iinwele zakho zinyukile, zingabonakali xa iinwele zakho ziphantsi. Oku kunqunyulwa kulungele amanenekazi aneenwele ezimfutshane, kuba ikuvumela ukuba ubuyise iinwele zakho ngaphandle kwesigidi esiwela ngasemva.
Ifoto nguRodin Eckenroth / Getty Izithombe
14. I-Geled Edges
Amanenekazi aneenwele zendalo: Sukungayihoyi loo miphetho. Xa zibekwe ngokufanelekileyo, zikhangeleka njengobugcisa. Dab kancinci cream ulawulo emphethweni kwaye usebenzise ibrashi yamazinyo ethambileyo ukubumba amaza.
UStephane Cardinale - Corbis / Getty Izithombe
15. I-Angular Afro
I-afro eqhelekileyo intle, kodwa icala elisecaleni lenza wonke umahluko. Sebenzisa ikama ye-rattail kumgca ochanekileyo.
Umdlalo weetrone ixesha labalinganiswa abasi-7
Ifoto nguDomininique Charriau / Getty Izithombe
16. I-A-Line Lob
Xa i-lob isikwe kancinci ngaphezulu ngasemva, ivumela iziqwenga zangaphambili ukuba ziwe ngakumbi endaweni efanelekileyo. Funda: Akukho zinwele zingqukuva zinxantathu.
UMike Pont / Getty Izithombe
17. Super-Pixie emfutshane
Oku kufutshane 'kukwenza ulondolozo olusezantsi kakhulu, unokukwazi ukuphuma ebhedini uhambe. Owu, kwaye isebenza kuzo zonke iintlobo zeenwele, ukusuka kwi-coil ukuya ngqo.
UJeff Kravitz / AMA2017 / Getty Izithombe
Cheba amacala entloko kwaye ugcine ubude obuncinci embindini. Iic curls ezimbalwa ezimdaka ziyenze yanamhlanje.
19. Ubunzima beWavy
Ubude obudumisayo ngokoqobo kuye wonke umntu. Cela ukuba ibethe ngaphezulu kwamagxa akho, ke ayimfutshane kakhulu xa uzuliswa.
20. Angled uBob
Ihlala imfutshane kancinci ngasemva kwaye ngokuthe ngcembe inde ngaphambili, le ndlela ibukeka intle xa inxityiwe (ukuze ukwazi ukubona ithambeka elithambileyo).
iindlela zokumisa iinwele ziwe kwangoko
UJuan Naharro Gimenez / Getty Izithombe
Iigals ezinenwele ezimnyama, le yeyakho. Ubeko kuyo yonke intloko yakho luya kukhanyisa izinto ukuya kumthamo ongenasisindo.
UDave Kotinsky / Getty Izithombe
22. U-Bob ongenakulinganiswa
Kude kancinci kwelinye icala kunelinye; icala elisecaleni elinzulu ligxininisa umahluko kubude.
UMark Davis / Getty Izithombe
23. Uluhlu lweShag
Yinqumle imicu emincinci ibe sisiqwenga somgubo ukuze uhlaziyeke.
Ifoto nguGilbert Carrasquillo / Getty Izithombe
Ulungelelwaniso ngokugqibeleleyo yindlela esiyithandayo. Gcina uninzi lwevolumu emacaleni ngenxalenye yeziko.
Ifoto nguLaura Cavanaugh / Getty Izithombe
25. Ilayishwe ngeKhethini yeBangs
Isitshixo kukwenza ukuba ii-bangs zakho zidityaniswe kunye namaleya akho.
26. Isityalo esiqinileyo
Phakathi kwe-pixie kunye ne-afro, esi sitayile simile ngokugqibeleleyo kodwa ngaphandle kokuphola.
Ifoto nguGregg DeGuire / Getty Izithombe
27. Blunt Bangs
Kwigalthi esele ikhulile esazithanda iivenkile ezithengisa izinto kunye neemarike zentakumba.Yenza i-stylist yakho yomile-uyinqumle ukuze ungavumi ukuya kufutshane kakhulu.
Ifoto nguJB Lacroix / Getty Izithombe
28. Ixesha elide kwaye ligobile
Amantombazana athambileyo anokuhamba ixesha elide, nawo. Mane ubuze uluhlu olude ukuze izinto zingasindwa kakhulu.
UFred Duval / Getty Izithombe
29. I-Shaggy Lob
Amacwecwe ambalwa kunye namaza akhululekileyo enza oku kubonakale kunjaloulwandle-chic.
30. I-Bang-Side-Swept Bangs
Inwele ekwenza ubonakale ukhaphukhaphu iiponti ezilishumi. Hayi, nyhani. I-engile apha iyakhohlisa iliso ekucingeni ukuba ubuso bakho bunqabile.
URachel Murray / imifanekiso kaFetty kaL'I-Oreal eParis
31. Iingqimba eziLayishiwe
Kwivolumu yangoku kubob, yongeza amaza athambileyo kulo lonke elaseViola apha.
UPaul Zimmerman / Getty Izithombe
32. IPixie eqingqiweyo
Imfutshane emacaleni kunangaphezulu, yipixie ende yeenwele zendalo. I-Aka yeyona ndlela ifanelekileyo yokubonisa ubume bethambo lakho.
Ifoto nguFrazer Harrison / Getty
33. I-Curly Bangs
Ngubani othe ii-bangs kufuneka zichaneke? Chop ezi zomileyo, nazo, ukuze ufumane ukufundwa ngokuchanekileyo kubude.
34. I-Lobled Tobled
Mfutshane, ujingi kwaye unamandla. Inxalenye encinci ye-flip-over yongeza kuloo nto ingenamandla.
35. I-Curly Shag
Izitshixo ezifutshane ezijijeneyo, iileya ezimfutshane kunye nee-bang-fussy bangs zenza indibaniselwano yokuphumelela.
Ifoto nguGeorge Pimentel / Getty Izithombe
36. Umaleko omfutshane wokuKhangela ubuso
Beka lonke ugxininiso kubuso bakho obuhle kunye namanqanaba atsala iliso phezulu. Ibhonasi: Amagqabantshintshi ambalwa aqaqambisa umbala wakho.
Ifoto nguJason Merritt / Getty Izithombe
37. IPixie yokutshayela
Yiya mfutshane ngasemva kwaye ubude kancinci ngaphezulu. Emva koko brasha iinwele phambili ukuze ufezekise oko kujongeka.
Andrew Chin / Getty Izithombe
38. IiBelly Curls
Azivakali njengelonwabo — ziyiloo nto. Amacwecwe amafutshane aqala ngeenxa zonke kwitempile adibanisa ivolumu eninzi yonke indlela ezantsi.
39. Uluhlu Lamadlelo Amagxa
Obu bude buphakathi bunqumle izitayile ngokwazo. Makume umoya-owomileyo kwindalo kunye nevolumu.
40. UBouncy Bob
Uyabuthanda ubude be-bob, kodwa ufuna umzimba ongaphezulu? Sika amanqwanqwa amade ajikeleze ubuso bakho nge-oomph eyongezelelweyo.
I-buzzed right off, le iinwele yeyona nkcazo yokungabikho kwengxabano. Inqaku: Ukuba uya kwinani lesithathu okanye lesine, iinwele zakho ziya kuba nde ngokwaneleyo ukuba zidayye (ukuba uyafuna).
UTaylor Hill / imifanekiso kaFetty
42. IPixie yevolumu
Yonke ivolumu ngaphandle kobunzima. Iphantse yafana ne-mohawk esele ikhulile-yenza nje ibrashi iinwele phezulu kwaye ubuye ukuze ufumane i-vibe ethe kratya.
43. UBob ngee-Bangs
I-choppier iphela, ngcono. Qaphela: Olu lusiko olunye oluya kufuna ukulungiswa rhoqo ukugcina ubude obulungileyo.
44. I-Midi eyahlukileyo
Ubungqina bokuba ubude obuphakathi abusoze budike. Sika iileya ezingaphantsi kwamagxa ukongeza ukungxama kumaza alwayo.
Ifoto nguAmanda Edwards / Getty Izithombe
45. Shag yanamhlanje
Mfutshane kwaye uneentsiba zokuphumelela. Le iinwele yongeza umzimba nakwezona zinwele zincinci.
Ifoto nguDonato Sardella / Getty Izithombe
46. ​​Midi enye
Imiphetho e-Super-blunt esemhlabeni ongaphantsi kwe-collarbone iphosa ngakumbi xa inxibe i-sleek.
47. Amacwecwe abukhali
Awunakuphulukana nala maleko. Cela amanqwanqwa okanye ii-angles ezibukhali ngaphambili ukuze ukhanyise iinwele ezishinyeneyo.
48. Amagagasi oBude bamaGxa
Kukho isizathu sokuba iiDuchess zinxibe le nwele kakuhle-yeyakudala, ipolishiwe kwaye isebenza kakuhle ngesithsaba (okanye umnqwazi, ukuba ungumntu ofayo njengathi).
49. Usana Bangs
Ezi bangs ngabom zifutshane kakhulu kwaye siyayithanda. Zinqumle iisentimitha ezimbalwa ngaphezulu kwamashiya akho kwimbonakalo yefashoni ephezulu.
50. Icala lokucheba icala
Thatha icala elisecaleni ukuya kwiindlela ezintsha ngokucheba icala elicekethekileyo umva emva kwendlebe yakho.
Iintlobo zegolide ezinqamlezileyo
Izigaba #isenzosichasene Nokuxhatshazwa Iinto Zokuzilungisa Iincwadi
esona siseko sodibaniso lolusu
Imidlalo yepati yangaphakathi yabantu abadala
Izibonelelo ze-badam rogan ngeenwele
Uluhlu lweefilimu zothando lwasehollywood
ukuzilolonga ukutshisa amanqatha esisu ngokukhawuleza
Unyango lwasekhaya lolawulo lokuwa kweenwele kunye nokuzila kwakhona